I-Exuma Point Beach Resort: i-Peach Poinciana Seaview Studio - I-Airbnb
I-Exuma Point Beach Resort: i-Peach Poinciana Seaview Studio
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMaryann & Elvis
Isitudiyo esiqaqambileyo, esandula ukwakhiwa kunye nesibanzi-umbono omangalisayo wamanzi! Ukuhamba kancinci ukuya elunxwemeni apho unokonwabela iimayile zesanti kunye nokusefa, thatha ukhenketho ngesikhephe ukubona iihagu eziqubhayo kunye neeiguana okanye uzibone kukhenketho lwethu lokutyibiliza kwijethi! Kuninzi ongakubona apha eparadesi kwaye kukuhamba nje okufutshane ukuya eCocoplum Beach! Ekubhukisheni, siya kukuthumelela incwadi yesikhokelo yedijithali equka iingcebiso ngezinto onokuzenza kwaye uzibone ngelixa ulapha eparadesi!
IBha yaselwandle kunye neGrill ivulwa ngeentsuku ezisi-7 ngeveki kwisidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa kwangethuba & nesidlo sakusasa NGESICELO.* Ububele bethu buyaziwa! Sijonge kwi-Tripadvisor.
*ASIYONA Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ebandakanyayo.
*NGOKUQHELEKILEYO AKUKHO KONAKALI KWENkanyamba KWIEXUMA OMKHULU, BAHAMS*
Lo mhlaba umangalisayo unombono ongakholelekiyo woludwe olukhulu lolwandle oluhle kulo naliphi na icala... Ungandwendwela i-Exuma Flats yethu kwicala elinye (i-sandbar enkulu) okanye uthathe uhambo lokuya eCocoplum Beach kwelinye icala (enye ye Iilwandle ezidumileyo ze-Exuma)... Okanye uchithe nje iintsuku zakho uzipholele elunxwemeni lwethu nge-cocktail esandleni sakho!
Xa uhlala nathi uya kuhlala kwindawo encinci yokuchithela iiholide eneendawo ezilishumi elinesithathu ezinqabileyo kunye neevillas ezisanda kwakhiwa ezinikezela bonke ubutofotofo bekhaya!
I-Exuma Point Beach Bar & Grill yethu emangalisayo ibekwe kanye kwipropathi kwaye ikulungele ukuhoya wena nosapho lwakho. Isidlo sakusasa siyafumaneka ngesicelo kwaye sivulele isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kwangoko, iintsuku ezisi-7 ngeveki*. Ukubuk' iindwendwe kwethu kunye nokutya kwethu kwaziwa!
Qaphela ukuba ii-studio zethu zifana negumbi lehotele (nangona iphangalele, uhlaza olujikelezileyo kunye nokwamkela iindwendwe okungcono!) Kuba akukho khitshi. Kukho umenzi wekofu, ifriji yebha kunye ne-microwave kodwa khumbula ukuba le yunithi ifanelekile kubantu abasendleleni abangafuni kupheka iholide yabo kude;)
Singaphandle nje kwendawo yokuhlala yaseRolleville kwaye malunga nemizuzu engama-30 ukuya eGeorgetown. I-Exuma Point Beach Resort iseRolleville, kwindawo ekuMntla-mpuma. Ijikelezwe ziilwandle zesanti emhlophe ezicocekileyo, indawo ekuchithelwa kuyo iiholide yeyona ndawo ifanelekileyo yokukhupha iplagi kubomi bemihla ngemihla. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide yimizuzu engama-30 yokukhwela iKayak kude (okanye kungcono, kuhambo lokukhwela isikhephe kunye no-Elvis, umnini) ukusuka kwiihagu zokuqubha kunye nomngxuma ozuba odumileyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Maryann & Elvis
Silapha ukuze sikukhonze! Ke, umamkeli wethu kwi-intanethi uya kujonga imibuzo yakho ngaphambi kokufika. Emva kokuba ungene nathi uba yinxalenye yosapho lwe-Exuma Point!
UMaryann (owaziwa kakhulu ngenkangeleko yakhe kuxwebhu oludumileyo lweNetflix; I-FYRE-Owona Mnyhadala mkhulu ongazange Wenzeke) kunye nomyeni wakhe u-Elvis, ngabanini kwaye balawula ipropathi. Bahlala kwisiza kwaye bayafumaneka ukujongana nazo naziphi na iimfuno onokuba nazo. UMaryann yintloko yompheki e-Exuma Point Beach Bar & Grill kwaye awuzukuthanda kuphela ukutya kodwa uya kuyixabisa inkampani yakhe njengoko inguye umninimzi!